Home Wararka Maanta Somalida Waddaniyiinta ah waa Faraxsan yihiin Somalidiidna Asaay ayaa u Saarantay.
Kadib markii uu RW Rooble iyo Golihiisa wasiirada ay qaateen tallaabo geesinnimo leh oo ay ku amaanan yihiin oo ay OLNF xaqooda iyo mansabkooda u siiyeen ayaa waxaa Asaay saartay kooxdii Somalidiid ee Farmajo, Kheyre, Fahad iyo Beyle oo la sheegay xataa maanta inuu ka soo horjeestay in la aaxo khaladkii laga galay walaalaha xaq u dirirka ah ee OLNF ee lagu shaabadeyey in yihiin aragagixiso. Runtii Mandella maalin ayaa gumeyste iyo gumeyste kalkaal u aqoonsanaayeen inuu argagixiso yahay, OLNF na kama duwana.
Marka Asaayda, xanaaqa iyo is ciilkaambiga doqon u adeegga ah laga soo tago waxaa si aad ah u faraxsan Somali badan oo wliba maalintaas nafftooda khatar u geliyey kuna waayey wax badan oo ay mudnaayeen. Dadkaas oo aad u badan waxaan ka xuseynaa laba qof oo iyagu hayey masuuliyado kuwaas oo hubay inay ku waayi karaan xataa naftooda maadama kooxda Somalidiidka ah ay diyaar u ahaayeen inay xanuujiyaan cid kasta oo damacooda ka hortimaada, u dhiibaan codow ama ku shaabadeeyaan inay yihiin argagixiso oo macnaheedu yahay ciddii aragtaa ha disho.
Wasiirkii Maareynta Masiibooyinka ee Xelligaas DR Maryan Qasim ayaa waxay si cad u sheegtay inaan codkeeda qof Somali ah lagu dhibaateyneyn inay ugu gargaarto maahe, taas oo ku kalliftay ina shaqo saharf iyo awoodba leh ay ka dhaqaaqdo. Dr Maran maanta Asaay uma saarna waxaa farasan tahay waxayna ku naallooneysaa sharaftii ay shacbiga Somaliyeed ka kasbatay iyo ajarkii ay xagga Rabbi ka heshay.
Sidoo kale waxaa isagana si geesinimo ah ugu adeegay bulshada Somaliyeed magaca iyo sharafna u soo jiiday beesha u soo dirsatay golaha shacbiga oo maalintaas iyo ilaa maanta dareensan inuu hormuud xaqa iyo Somalinimada xataa haddii ay kaligiis ku yahay. Qofkaas waa Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo si Sharaf iyo maamuus leh u sharraxay maalintaas gefkii distuur, kii Somalinimo iyo kii Islaanimo ee sida bareerka ah u galeen Farmajo, Fahad, Xasan Cali Kheyre iyo wasiir Cabdiarxman Beyle.
Ogaada Kursiga HOP 147 ee ku fadhiyey Mahada Salaad mar walba wuxuu ahaa kursi dalka iyo dadka lagu difaaco. Dowladnimada iyo shuruucda dalkana lagu ilaaliyo, waxaana rajeyneynaa inuu sii ahaado oo aan waddani cadkiisa muran la gelin sida Dr. Maryan Qasim iyo Xil. Mahad Salad.
Dhamaantood kooxdaan Somalidiidka ah maranaba kama hadal, kamana qoomameyn wixii ay ku faleen halgame Cabdikarin Sh Muuse Qalbidhagax, waxayna diyaar u yihiin inay cid waliba ku sameeyaan waxaas iyo wax ka xun maanta haddii ay awoodaan, waxaana kuugu filan wixii ay ku faleen 23 jir, gabar, walaal ah, saaxib ah oo waddaniyad ah Ikraan Tahliil Faarax oo ilaa iyo maanta geeri iyo nolol aan midna lagu ogeyn.
Runtii qofkaaga markaad duugto waad samirtaa bal akhristow qiyaas waalida iyo ehelka Ikraan oo telefoon kasta oo us oo dhaca is leh armaa nolosheeda laguu sheegaa, iyadoo weli ay nabad ku daaqayaan kuwii waxaas iyo wax ka daran dadka Somaliyeed ku falay.
Haddaba RW Rooble iyo Golaha wasiirada ee maanta taariikhda ayaad ku gasheen shar foo Somalidoon waad ka farxiseen halka Somalidiidyada Farmajo, Fahad, Kheyre iyo inta la midka ah aad Asaay u saarteen.
Taariikhda xaasid iyo baarri toona maah ee waa run is qorta marka xusuuso hadalkii MW Aden Cabdulle Cisman ee ahaa “ Somalida raggeeda ha kala barato”.
Previous articleMustafe Cagjar oo si weyn u soo dhoweeyay Go’aankIi Golaha Wasiirada
Next articleONLF oo bogaadisay go’aanka xukuumadda Soomaaliya
Waare oo si degdeg ah ku magacaabay Guddigii Doorashada Federaalka ee...